Harry Maguire Oo Wali Ku Xidhan Giriigga Iyo LABA Dembi Oo Uu Ciqaab Ku Mutaysan Karayo Oo La Shaaciyey - Gool24.Net
Harry Maguire Oo Wali Ku Xidhan Giriigga Iyo LABA Dembi Oo Uu Ciqaab Ku Mutaysan Karayo Oo La Shaaciyey
August 22, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Kabtanka Manchester United, Harry Maguire ayaa lagu eedeeyey inuu galay laba dembi oo uu ciqaab ku mutaysan karayo intii uu joogay Jasiiradda Mykonos ee waddanka Giriiga oo habeen hore lagu xidhay, illaa haddana uu ku jiro saldhig isaga iyo laba qof oo kale.
Maguire oo £85 Milyan oo Gini ay Manchester United kaga soo iibsatay Leicester City xagaagii hore ayaa laba habeen u hoyday saldhig boolis oo uu ku xidhan yahay, waxaana uu maxkamadda kasoo hormuuqday shalay iyadoo ay wali sii socon doonto dhegaysiga dacwaddiisu.
Difaaca reer England ayaa maxkamadda horteeda lagaga eedeeyey inuu galay laba dembi oo kala duwan oo dhamaantood ahaa weerarro uu ku qaaday ciidamada booliska.
Dembiga hore oo ka dhacay hotel lagu caweeyo Maguire, xaaskiisa iyo asxaabtiisu ay ku sugnaayeen ayaa uu laacibkani ku aflagaadeeyey saraakiil boolis ah, kaddibna waxay gacan u qaadeen oo ay feedheen sarkaal ka tirsan ciidamada.
Fal kale oo dhacay subaxnimadii hore ee waqtiga Giriiga ayaa Maguire iyo asxaabtiisu ay mar kale booliska ku weerareen.
“Waxay aflagaaddeeyeen kaddibna shafka ka garaaceen sarkaal boolis ah.” Ayuu yidhi afhayeenka booliska oo faahfaahinayay dembiga hore ee uu galay Harry Maguire.
Dembiga labaad ee ay galeen Maguire iyo laba qof oo la socday ayay boolisku faahfaahiyeen, waxaanu afhayeenka oo sii hadlay yidhi: “Kaddib boolis isku dayay inay u kexeeyaan saldhigga ayaa ay iska caabbiyeen, waxaanay riix-riixeen, waxna ku dhufteen saddex sarkaal oo booliska ka tirsan.”
Maguire iyo asxaabtiisa ayaa loo qaaday jasiiradda Syros oo shalay ay ka bilaabantay maxkamaddoodu, waxaana xeer ilaalintu ay maxkamadda hor dhigeen dembiyada loo haysto oo ah kuwo ciqaab ay ku mutaysan karayaan.
Gal-dacwadeedkooda oo boolisku akhriyeen, ayaa waxa ku cad eedaha loo haysto, waxaana ka mid ah: “Amar-diiddo, dhaawacyo jidheed oo ay geysteen, aflagaaddo iyo inay isku dayeen inay laaluush siiyaan shaqaalaha.”
Qareenka Maguire, Konstantinos Darivas, ayaa warbaahinta kula hadlay waddanka Giriigga, waxaanu sheegay in kabtanka Manchester United uu beeniyey dembiyada ay booliska Giriigu kusoo eedeeyeen.
“Dacwaddu way socotaa, Maguire na xaaladdiisu way wanaagsan tahay. Berri subaxa (maanta) ayaanu awoodi doonaa inaanu faahfaahin bixino. Wuxuu beeniyey eedaymaha, waxaanu kalsooni buuxda ku qabaa in berri lasii deyn doono.” Ayuu yidhi Konstantinos Darivas.”